လျှို့ဝှက်နေရာတွေကို အမေရိကန် စစ်သည်တွေ မတော်တဆ ထုတ်ဖော်ပြမိ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး လျှို့ဝှက်နေရာတွေကို အမေရိကန် စစ်သည်တွေ မတော်တဆ ထုတ်ဖော်ပြမိ
လျှို့ဝှက်နေရာတွေကို အမေရိကန် စစ်သည်တွေ မတော်တဆ ထုတ်ဖော်ပြမိ
အမေရိကန် စစ်သည်တွေဟာ GPS နဲ့ အပလီကေးရှင်းနဲ့ အပြေးလေ့ကျင့်ရာ လမ်းကြောင်းကို လူသိရှင်ကြား မျှဝေရာကနေ အီရတ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့ ဆီးရီးယားရှိ လျှို့ဝှက်နေရာ စစ်အခြေစိုက် မြေပုံတွေကို မတော်တဆ ထုတ်ဖော်ပြမိလျက်သား ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
TAJI, IRAQ – APRIL 12: U.S. Army trainers watch as an Iraqi recruit fires atamilitary base on April 12, 2015 in Taji, Iraq. U.S. forces, currently operating in5large bases throught the country, are training thousands of Iraqi Army combat troops, trying to rebuildaforce they had origninally trained before the U.S. withdrawal from Iraq in 2010. Members of the U.S. Army’s 5-73 CAV, 3BCT, 82nd Airborne Division are teaching members of the newly-formed 15th Division of the Iraqi Army, as the Iraqi government launches offensives to try to recover territory lost to ISIS last year. (Photo by John Moore/Getty Images)
ဂြိုဟ်တု အချက်အလက်တွေ အသုံးပြုပြီး အားကစားမှာ အသုံးဝင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မျှဝေတဲ့ စထရာဗာ ဝက်ဘက်ဆိုက်မှာ မြေပုံတွေ တင်ရာမှာ အမေရိကန် စစ်တပ်နဲ့ မဟာမိတ်တွေ အသုံးပြုတဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းတွေကို ဖော်ထုတ်မိလျက်သား ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အီရတ်မှာ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး စစ်အခြေစိုက် စခန်းနေရာတွေ၊ ဆီးရီးယားနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရာ လမ်းကြောင်းတွေကို အပလီကေးရှင်းမှာ ပေါ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်တွေ အပေါ် အခြေခံပြီး မြေပုံကိုဆွဲကာ အများပြည်သူသုံးနိုင်အောင် လုပ်ခဲ့တာသာ ဖြစ်တယ်လို့ စထရာဗာက တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
လြှို့ဝှကျနရောတှကေို အမရေိကနျ စဈသညျတှေ မတျောတဆ ထုတျဖျောပွမိ
အမရေိကနျ စဈသညျတှဟော GPS နဲ့ အပလီကေးရှငျးနဲ့ အပွေးလကေ့ငျြ့ရာ လမျးကွောငျးကို လူသိရှငျကွား မြှဝရောကနေ အီရတျ၊ အာဖဂနျနစ်စတနျနဲ့ ဆီးရီးယားရှိ လြှို့ဝှကျနရော စဈအခွစေိုကျ မွပေုံတှကေို မတျောတဆ ထုတျဖျောပွမိလကျြသား ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဂွိုဟျတု အခကျြအလကျတှေ အသုံးပွုပွီး အားကစားမှာ အသုံးဝငျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ မြှဝတေဲ့ စထရာဗာ ဝကျဘကျဆိုကျမှာ မွပေုံတှေ တငျရာမှာ အမရေိကနျ စဈတပျနဲ့ မဟာမိတျတှေ အသုံးပွုတဲ့ စဈဘကျဆိုငျရာ လမျးကွောငျးတှကေို ဖျောထုတျမိလကျြသား ဖွဈခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အီရတျမှာ ရှိတဲ့ နာမညျကွီး စဈအခွစေိုကျ စခနျးနရောတှေ၊ ဆီးရီးယားနဲ့ အာဖဂနျနစ်စတနျရှိ စဈရေးလကေ့ငျြ့ရာ လမျးကွောငျးတှကေို အပလီကေးရှငျးမှာ ပျေါနတော ဖွဈပါတယျ။ သတငျးအခကျြအလကျတှေ အပျေါ အခွခေံပွီး မွပေုံကိုဆှဲကာ အမြားပွညျသူသုံးနိုငျအောငျ လုပျခဲ့တာသာ ဖွဈတယျလို့ စထရာဗာက တုံ့ပွနျထားပါတယျ။
Previous articleMyanmar Cyber Security Challenge 2018 ပြိုင်ပွဲအကြောင်း (ရုပ်/သံမှတ်တမ်း)
Next articleလိင်ဆက်ဆံတဲ့ အပြုအမှုနဲ့ ကခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ ကမ္ဘောဒီးယားမှာ အဖမ်းခံရ